Momba ny fividianana trano tsy misy fananana - tranom-barotra Dubai avy amin'ny Provident
Dubai no emiraatin'ny Emira Arabo Mitambatra (Emirà Arabo Mitambatra) mba handray anjara amin'ny trano fonenana mahaleotena, amin'ny fotoana izay nomen'ny UAE sy GCC olom-boafidy hanana fananana ao Emirà Arabo Mitambatra. Mividy miova tsikelikely ny fividianana ny trano any Emiràta ary ho lasa lavitra kokoa.
Ao amin'ny 2001, nanaiky ny hamela ireo mpitsoa-ponenana hanana fanofanana 99 taona ho an'ny fananan'i Dubai manokana, saingy tamin'ny volana Mey 2002, ny printsy voafonja tao Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dia namoaka didim-panjakana mamela ny vahiny hividy trano amin'ny freehold fananany. Taorian'ny didim-pitsarana nataon'i Sheikh Maktoum, dia niteraka hetsi-panoherana ara-barotra tao amin'ny tranom-ponenana tao Dubai izany.
Ny fividianana ny fananan-tany amin'ny fototry ny voankazo dia midika fa nomena ny anaran'ny tompony ny tany, ary ny tompony dia manan-jo hivarotra, handoa na hanofana ny taniny amin'ny fahamendrehany. Ny tompon'ny fananana sy ny fianakavian'izy ireo dia azo omena fahazoan-dova azo havaozina ao Dubai. Ny tranom-bahiny ao Tahiry dia ahitana ireto faritra manaraka ireto:
Umm Hurair faharoa: teboka No. (013)
Al Barsha faharoa atsimo: teboka No. (002)
Al Barsha fahatelo atsimo: teboka No. (002)
Emirates Hills aloha: Plots No (004) sy (814)
Emirates Hills faharoa: Tsipiriany (001) sy (049)
Emirates Hills fahatelo: Diovy No (001)
Jebel Ali: Plots Nos. (051), (074), (081), (082) (083), (084), (142), (143) ary (391).
Al Jadaf: Plort Nos (003), (007) ary (008)
Ny nosy lehibe: Plot No. (001)
Ras Al Khor: teboka No. (165)
Al Rawiya: Plots Nos (063) sy (065)
Sheikh Zayed Road: Teboka No. (118) sy (147)
Safooh aloha: Plot No. (069)
Safooh Faharoa: teboka No. (005)
Al Gouz Fahatelo: Tsanganana Nos (005) sy (006)
Al Gouz Second Industrial: teboka Nos (010) sy (030)
Al Gouz Third Industrial: Diary (028)
Merdif: Plots Nos. (143) sy (144)
Dubai Marina: Plots Nos. (007), (014), (015) ary (033)
Palm- Jebel Ali: teboka No. (001)
Nad Al Shiba: Plots Nos. (209), (215) ary (222)
Warsan Voalohany: Plot No. (002)
FAQs amin'ny fividianana tranom-bahiny
Nahoana no nekena ny lalàna?
Ny Lalàna dia navoaka noho ireto antony manaraka ireto:
Voalohany indrindra dia ny mifehy sy manampy ny fanao efa misy mifandraika amin'ny fisoratana anarana ho an'ny UAE Nationals;
Mba hanamafisana bebe kokoa sy hanamarina ny tena toeran'ny GCC Nationals momba ny zon'izy ireo ho an'ny fananan'i Dubai;
Ny fisafidianana ireo tetikasam-pampandrosoana izay mety ho fanànan'ny vahiny azy;
Manolotra fitondrana izay ahafahan'ny olona manome alalana ny zon'izy ireo hividy sy hanana fananana ao Dubai, ary koa ny fiarovana amin'ny fananana anaram-boninahitra an-trano voasoratra anarana ho azy ireo.
Inona ny sata maha-olom-pirenena UAE sy GCC eo ambanin'ny Lalàna?
Tsy misy fahasamihafana manavaka ankehitriny eo amin'ny UAE sy ny GCC Nationals, satria izy ireo dia tokony hanome ny sata mitovy amin'ny fitsipika.
Miaraka amin'ireo lalàna ireo, ny UAE sy ny GCC Nationals dia afaka manana fananana na aiza na aiza manerana an'i Dubai ary manana ny lohateny voasoratra anarana amin'ny anaran'izy ireo ao amin'ny Departemantan'ny Lande. Ny zo fototra mety ananany dia ahafahana manana fananana fiantohana, fanofanana maharitra hatramin'ny 99 taona, ny zo hanorina eo amin'ny tany iray an'ny olon-kafa, fantatra amin'ny hoe Musataha
Inona no toeran'ny tompon'ny firenena hafa ankoatra ny UAE na ny GCC Nationals?
Araka ny voalazan'ny Andininy 4 ao amin'ny Lalàna vaovao, ny zom-pirenena rehetra ankoatry ny UAE na GCC dia manana zo hanana loharam-boninahitra malalaka, latsaky ny 99 taona, na ny zon'ireo zo voalaza etsy ambony voalaza etsy ambony ao Dubai, araka izay voafaritry ny fankatoavan'ny mpitantana. .
Izy io dia tokony hampidirina ny tetikasa tandrify azy ao amin'ny portfolio an'ny Dubai Properties, Nakheel sy Emaar miaraka amin'ny hafa. Ary ny tetikasa hafa dia mety hampidirina, ohatra, ireo any Dubailand.
Manavaka ny olona sy ny orinasa vahiny ve ny Lalàna?
Samy afaka mividy trano izy ireo. Ny zon'ny manan-trano ao amin'ny faritra voatendry sy nahazo ny anarana voasoratra anarana dia natolotra ho an'ireo vahiny sy orinasa vahiny, fa raha misy orinasa te-hividy trano dia tsy maintsy afaka manaporofo ny fisian'ny lalàna ao an-tranony izy ireo firenena.
Inona ny sata mifehy ny fatiantoka lava any amin'ny faritra hafa ankoatry ny voalazan'ny Mpitantana?
Ny fanofana lava dia samy hafa amin'ny fananana fiantohana tsy miankina amin'ny alàlan'ny fanofana lava any amin'ny faritra hafa ankoatr'ireo izay tendren'ny Mpitantana dia tsy azo alaina ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Tany ataon'ny vahiny manoloana ny Lalàna vaovao.
Na eo aza izany, mbola mitoetra ho toy ny zon'olombelona avokoa ireo mpindram-bola ireo ary feno lalàna amin'ny ankapobeny. Ny fatiantoka maharitra tsy voarakitra any amin'ny faritra ivelan'ny faritra voatondron'ny Mpitantana dia mbola azo zahana ho zon'ny tsirairay eo amin'ny fifanarahana eo amin'ny antoko. Ho an'ny fifandirana rehetra mety hitranga amin'ny fisian'ny fanofana tsy ara-dalàna dia mbola apetraka amin'ny Komitin'ny Distrika.
Misy fomba ahafahan'ny hafa firenena manana fananana ao amin'ny faritra tsy voafaritra?
Ny artikla 26 momba ny Lalàna vaovao dia manadihady ny toe-javatra misy ny fifanarahana natao mba hanomezana zo hanana zo hanana zo hanana olona izay tsy manana zo hanana azy, ary iza no tsy manan-jo hanoratra izany eo ambanin'ny Lalàna vaovao.
Ny artikla 26 (1) dia milaza fa ny fifanarahana na ny varotra natao tamin'ny fanitsakitsahana ny fepetra voalazan'ny Lalàna (na ny fikasana hanodina ny fepetra) dia tsy misy dikany. Ny artikla 26 (2) dia manohy milaza fa ny antoko fahatelo liana; ny Departemantan'ny Tany na ny fanenjehana araka ny lalàna dia manan-jo hangataka ny fitsarana hanambara ny tsy fandehanana toy izany.
Noho izany, mazava ho azy ny lalàna momba izany ary tsy misy làlana ao ambanin'ny Lalàna vaovao ho an'ny vahiny iray hanana fananana any amin'ny faritra tsy misy toerana.
Raha misy olon-kafa maniry ny hanana "fananana" any amin'ny faritra tsy voatondro, ny hany safidy dia ny miditra an-davan'andro ho an'ny trano, izay, na dia tsy ho azo atao aza ny fisoratana anarana, dia tsy hanohitra ny fepetra Lalàna vaovao.
Nahoana no tena zava-dehibe ny fisoratana anarana?
Izany dia manan-danja lehibe toy ny fanoratana ny tombotsoan'ny olona iray amin'ny lohan'ny fananana iray manome porofo tsy azo lavina ny fananany. Ny artikla 22 ao amin'ny Lalàna vaovao dia manome ny Departemantan'ny Landy ka hanome ny anaram-boninahitra an-tsoratra momba ny fananan'olon-tokana araka ny rakitsoratra misy ankehitriny ao amin'ny Registry Real Estate. Ny artikla 24 dia manohy milaza fa ny laharana an-tsoratra voalaza ao amin'ny Andininy 22 dia manana ny porofo mazava amin'ny fananganana zo ara-bola.
Inona ny dingan'ny fanoratana anarana an-tsoratra?
Ny artikla 6 ao amin'ny Lalàna vaovao dia milaza fa ny Departemantan'ny Landy irery ihany, raha tsy misy ny hafa, dia mahazo alalana hanoratra ny zo ara-drariny sy ny fatiantoka maharitra araka izay voalaza ao amin'ny Andininy 4. Raha vantany vao vita ny fananana iray ka omena ny mpividy, dia azon'ilay mpividy atao ny manome ny mpandrindra hanoratra ny lohateniny amin'ny anaran'ny mpividy ao amin'ny Departemantan'ny Real Estate ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Tany.
Ny fifanarahan'ny Sale sy Purchase ary ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany dia mety mila adika amin'ny teny Arabo (izay tokony hataon'ny mpamorona). Hangataka ny mpividy ny hanasonia ny fangatahana famindram-pahefana ho an'ny Departemantam-paritra, ho an'ny fampiasana ny Sampan-draharahan'ny Tany. Ity endrika ity dia hanome ny antsipirian'ny antoko, ny fananana, ny vidin'ny fividianana, sns.
Moa ve ny Departemantam-paritra momba ny fandoavana ny fisoratana anarana ho an'ny fisoratana anarana?
Azo atao ny mandefa ny saram-baventy sy ny mpividy mba handoavana ny saram-pandraharahana momba ny tany amin'ny fotoana fanoratana an-tsoratra. Ny ankamaroan'izy ireo ankehitriny dia ny 2% amin'ny vidin'ny fividianana, izay mety ho rava amin'ny alalan'ny fananana 1.5% azo vidiana amin'ny mpividy ary ny 0.5% izay azo vidiana amin'ny mpivarotra. Na izany aza, toy ny tena matetika ny tranga, ny mpividy matetika dia mitaky ny mpividy handoa ny 2% manontolo. Ity sandam-bola ity dia eo ambany famerenana ary mety hiova amin'ny ho avy.
Ho mandefa ny sandan'ny 2% amin'ny fividianana tany am-boalohany na ny vidin'ny fividianana farany indrindra ve ny Departemantan'ny Tany?
Amin'izao fotoana izao, ny fampiharana ny Sampan-draharahan'ny Landa dia ny fiampangana ny saram-pandaharana noho ny vidin'ny fividianana tany am-boalohany. Na izany aza, araka ny voalaza tetsy ambony, ny Sampan-draharaham-panjakana dia mety hampiditra fitsipika vaovao momba ny olana, ny fiheverana fa ny fiantohana ny fandoavam-bola dia mety hiova. Izany dia mety ho tafiditra ao anatin'izany ny fijerena ny vidin'ny fividianana amin'ny fifanarahana amin'ny varotra na ny sandan'ny fananana.
Ahoana no hahalalan'ny Sampan-draharahan'ny Landa ny "lanjan'ny vidin-tsolika" momba ny fananana mba hahafantarana ny habetsaky ny sandan'ny 2%?
Ny artikla 6, teboka 7 amin'ny Lalàna vaovao dia mitaky ny Sampan-draharahan'ny Tany "hametraka ny fitsipika mifandraika amin'ny fanombanana ny toetra tena izy". Tsy mazava tsara amin'izao vanim-potoana misy ankehitriny izao fa ny Sampan-draharaha momba ny tany dia hampiasa ny mpandinika azy manokana. Ny sangan'asan'ny Departemanta momba ny Tany dia natao hanamarina ny lanjan'ny fananana; ary manome valisoa ho an'ny mpividy mety, raha mangataka izany ny mpividy.
Ahoana ny momba ny fisoratana anarana anatiny?
Ny artikla 6 ao amin'ny Lalàna vaovao dia milaza fa ny Departemantan'ny Landy irery ihany, raha tsy misy ny hafa, dia omena alalana hisoratana ny zo ara-dalàna sy ny fatiantoka maharitra arak'izay voalaza ao amin'ny Andininy 4.
Ny dikany dia ny hoe ny rejisitra rehetra sy ny karazan-drafitrasa atolotry ny mpandrindra iray dia tsy ekena eto amin'ity Lalàna ity. Raha vantany vao nahazo ny fankatoavan'ny mpitantana ny faritra voatondro dia afaka manomboka ny fizotry ny fandefasana ny Departemantan'ny Tany. Ny fisoratana anarana anatiny dia hosoloina ny fisoratana anarana ara-dalàna ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Tany amin'ny toe-javatra misy ny fananana ara-batana ny fananana. Na dia mbola mbola misy eo aza ny fananana trano, dia tsy isalasalana fa hanohy ny fampiharana azy ireo ny mpikaroka ary hitazona ny rejisiny anatiny.
Raha misy mpividy iray misy mpividy iray mandoa mpandoa hetra iray, dia misy fandoavam-bola fanampiny angatahina amin'ny Sampan-draharahan'ny Tany?
Eny, ankehitriny ny lalàna dia milaza fa ny mpividy iray dia handoa vola roa. Raiso, ohatra, ny mpandrindra EMAAR. Manangona saram-pandraharahana izy ireo ho fanampiny amin'ny saram-pandefasana azo alaina amin'ny Departemantan'ny Lande.
Na izany aza dia tsara ny manamarika fa ity lalàna ity dia azo ampiharina mandritra ity dingana faran'ny tetezamita ity, ary raha vao tapitra ny fizotran'ny fisoratana anarana dia tsy tokony hividy amin'ny mpandraharaha ny saram-pisoratana anarana.
Ahoana no hosoratana anarana?
Ny artikla 23 amin'ny Lalàna no hany lahatsoratra mifandraika amin'ny fisoratana anarana ho an'ny efitrano fianarana sy ny birao amin'ny tranobe misy rihana maro. Ny Departemantan'ny Tany dia miasa amin'ny lalàna Strata vaovao izay tokony hivoaka mandritra ny herinandro vitsivitsy manaraka. Voamarina fa ity lalàna vaovao momba ny Strata ity dia hifanaraka tanteraka amin'ny olana toy ny tompona trano sy ny fitantanana ny faritra iraisan'ny tranobe, ny Associations Associations, ny fitsipiky ny fisavana ary ny toy izany.
Na izany aza, ny artikla 23 amin'ny ankapobeny dia mametraka ny feony amin'ny filazàna fa ny trano fonenana marobe na trano fananana dia heverina ho singa tena fananan-tany tokana ary ny folio dia voatondro ao amin'ny Tahiry Real Property.
Ny fametrahana fanampiny ao amin'ny anaran'ireo tompon'ireo trano sy efitrano sy faritra toy izany dia ampiana amin'ny folio tany am-boalohany. Na izany aza anefa, amin'ny fampiharana dia azo antenaina fa ny Departemantan'ny Landy no hanokatra rejisitra lehibe ho an'ny fananganana ny tenany, ary ao anatin'ny rejisitra mainty dia hisy ny fisoratana anarana ho an'ny trano na birao tsirairay.
Ny tompon'ny tranom-bahiny na birao dia hosoratana ho toy ny fananana ny tombontsoan'ny besinimaro ao amin'ny tarika misy azy, miaraka amin'ny anjara tsy voatanisa eo amin'ny sehatra iraisan'ny tranobe, araka ny isa mifandraika amin'izany. Ilaina ny manamarina fa ny lalàm-panorenan'ny fikambanana mpiara-miasa sy ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny fiarahamonina (raha azo atao) dia hosoratana ao amin'ny rejisitry ny fanorenana lehibe miaraka amin'ny fanamarihana ireo sangodina toy izany dia haseho amin'ny anaram-batan'olona tsirairay.
Ho afaka hisafidy ny fanaraha-maso ho an'ny daholobe ve ny rejisitra ao amin'ny Sampan-tany?
Ny artikla 5 ao amin'ny Lalàna vaovao dia manambara fa ny antoko fahatelo dia afaka manamarina ny lisitry ny fananana ary mahazo ny kopia voamarina amin'izany, raha toa ka manana antony ara-drariny ho an'io fanadihadiana io ny mpanelanelana. Ny dikany dia midika fa ny mety hividianana trano iray, ohatra, dia afaka mametraka ny fanontaniany mivantana amin'ny Sampan-draharaha momba ny tany amin'ny fifandraisana amin'ny tompony sy ny zon'ny olon-kafa izay mifandray amin'ny trano.
Iza no hampiady hevitra ny Lalàna vaovao?
Ankehitriny, ny fifandirana dia hiatrika ny fitsarana Dubai. Amin'izao fotoana izao ny seha-pifanakalozan-kevitra momba ny fametrahana fifanolanana eo ambanin'ny Lalàna vaovao, dia hametraka fitarainana mivantana amin'ny fitsarana ao Dubai saingy misy ihany koa ny fahafahan'ny Sampan-draharaham-panjakana mametraka ny fepetra manokana sy ny fifanaraham-pihavanana, saingy mbola tsy nanamafy izany ny Sampan-draharaham-panjakana.
Tsara ny manamarika fa, raha oharina amin'ny fatiantoka lava tsy ara-dalàna, dia mitazona ny zon'ny fifanolanana eo anelanelan'ny tompon-trano sy ny mpitrandraka ireo tsy miankina amin'ny Lalàna vaovao sy ny Komitin'ny Mivarotra.
Inona no fanafody azo alaina eo ambanin'ny Lalàna vaovao?
Ny artikla 10 ao amin'ny Lalàna vaovao dia miady hevitra momba ny fifandirana. Raha fehezina fohy dia tsy misy fepetra manokana eo ambanin'ny lalàna, fa ny fanafody efa misy dia manimba. Ohatra, raha toa ny mpivarotra iray tsy manaiky ny adidiny amin'ny Fifanarahana Sale sy Purchase ary tsy mandefa ny fananana amin'ny mpividy, ny mpividy dia afaka mitaky ny fahavoan'ny mpivarotra noho ny fahavoazana niaretany ary tsy afaka manery ny mpivarotra handoa ny fananany .
Ahoana no fiantraikan'ny Lalàna vaovao momba ny fitsipika momba ny lova amin'ny fananana?
Ny artikla 11 ao amin'ny Lalàna vaovao dia manambara fa ny fanambarana momba ny lova rehetra izay misy ny fananana ara-dalàna dia voasoratra ao amin'ny rejisitra tena izy. Milaza ihany koa izy fa tsy misy ny fomban'ny mpandova rehetra mifandray amin'ny zo toy izany dia manan-kery na mandaitra amin'ny antoko fahatelo, raha tsy voasoratra anarana izany. Amin'ny fampiharana dia midika hoe zavatra 3 izany:
Ny havan'ireo maty dia tokony hampiharina amin'ny Fitsarana noho ny fanambarana iray izay manondro ireo mpandray tombony;
Ny tombotsoan'ireo mpitsoa-ponenana noho ny mihatra amin'ny Fitsarana Sharia hanombohana ny fizotry ny fifandimbiasana; ary
Ny fanambarana momba ny lovan-tsofina dia voasoratra ao amin'ny lohatenin'ny maty ao amin'ny Departemantan-tany.
Raha vao manaraka ny dingana rehetra voalaza etsy ambony, dia eo anatrehan'ny mason'ny lalàna, ireo mpitsoa-ponenana dia raisina ho toy ny tompon'ny fananana iray.
Fa ahoana ny lalàna horaisin'ny Fitsarana mba hamaritana hoe iza ireo vahiny mandray vahiny?
Ny artikla 17 (5) an'ny Code of Civil Civil dia milaza fa ny Lalàna ho an'ny UAE dia hampiharina amin'ny sitrapon'ny mpiasan'ny fandefasana ny fananany ny tena fananana ao amin'ny UAE.
Na izany aza dia nisy lalàna vaovao federaly navoaka tamin'ny faran'ny 2005, ny Lalàna manokana momba ny raharaha (No. 28 an'ny 2005). Toa, noho ny Lalàna vaovao momba ny raharaham-barotra vaovao, ny vahiny dia afaka misafidy ny lalàn'ny fireneny mba hampihatra ny resaka momba ny lova amin'ny fananany. Na dia tsy mazava tsara aza izany, dia inoana fa manohana io fomba fijery io ny Departemantan'ny Tany.
Ahoana ny fiheveran'ny olona ny toeram-ponenana ary inona no tsy nokarohin'ny lalàna Lalàna vaovao?
Resadresy dia olana momba ny governemanta federaly fa tsy olana ara-dalàna ao an-toerana. Amin'ny ankapobeny, olona iray dia afaka manana fananana ao amin'ny UAE ary misafidy ny tsy hipetraka ao amin'ilay trano. Ny olana dia manjavozavo noho ny zava-misy ny mpikaroka manolotra visa amin'ny fividianana trano, fa na dia eo aza ireo olana roa momba ny fanànana ny trano sy ny fonenana / ny fanohanana dia tsy tokony hampangaina.